Inona no atao hoe seranana fampisehoana? - Rindrambaiko Digital Signage & rindrambaiko Wall Wall
No comments sur Inona no atao hoe seranana fampisehoana?Posted in Other Par Clemnamoaka Jona 21, 2021 Jona 21, 2021 Tagged tariby, Digital Signage, miseho, seranana fampisehoana, fanehoam, hdmi, seranan-tsambo, port, signage, USB
Ireo kinova samihafa amin'ny seranana fampisehoana
Ireo karazana seranana fampirantiana
Ny tsy fitoviana eo amin'ny seranana fampisehoana sy HDMI
HDMI haseho amin'ny seranana
Asehoy ny seranana amin'ny HDMI
Inona no atao hoe seranana fampisehoana? Ny seranana fampisehoana izay azo antsoina koa DP dia fampisehoana nomerika nomerika natao hampifandraisana ny solosaina amin'ny fampisehoana azy ireo. Ity teknolojia ity dia natao tao amin'ny Sillicon Valley, Kalifornia, tamin'ny faran'ny taona 2000.
Ny iray amin'ireo marika voalohany nampiasa ity teknolojia vaovao ity dia Apple tamin'ny taona 2008, nampiditra rafitra "mini display port" ao amin'ny solosain'izy ireo. Tamin'ny 2009, Lenovo hampiditra ity rafitra vaovao ity koa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny atao hoe seranana fampisehoana sy ny mahasamihafa ny seranana fampisehoana sy HDMI. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fitaovana ilainao ianao mba hampiasa Easy Multi Display, vakio ny lahatsoratray "Inona avy ireo fitaovana fampitaovana nomerika tokony hampiasaiko?"
Ny seranana fampirantiana dia mpampitohy audio / video nomerika ho an'ny fampisehoana, ahafahany mandefa sary misy famaritana feo sy famaritana avo amin'ny efijery. Ny tombony lehibe amin'ny seranana fampirantiana dia ny fahafahan'ny bandwidth sy ny kalitaony audio / video, saingy ity teknolojia ity dia tsy nisolo ny haitao hafa toa ny HDMI.
Version voalohany: Display Port 1.0
Manohana ny tahan'ny data 10.9 Gbps
Manana fantsom-pitantanana biolojika fanampiny 1 Mbps
Andiany faharoa: Display Port 1.2
Manohana ny tahan'ny data 21.6 Gbps
Mamela ny 4K amin'ny 60 fps
Ny fantsona mpanampy dia manana bandwidth 720 Mbit / s ary afaka mitondra USB 2.0 sy ethernet noho izany.
Andiany fahatelo: Display Port 1.3
Fantsom-pifandraisana 32.4 gbps
Ahafahanao mikoriana 4k roa amin'ny 60 fps, iray renirano 4k amin'ny 120 fps, ary 3D voafaritra avo
Manohana ny fampisehoana 5K RGB sy ny fampisehoana 8K
Andiany fahefatra: Display Port 1.4
Teknolojia New Display Stream Compression 1.2 (DSC)
Famatrarana stream (3: 1)
Afaka mamela 8k amin'ny 30 IPS sy 4k HDR amin'ny 120 fps
Rehefa miresaka karazana seranana fampirantiana isan-karazany isika dia miresaka mpampitohy isan-karazany ary manana roa amin'izy ireo izao dia ny "seranan-tsambo mahazatra" ary ny "seranana fampisehoana mini".
Ny seranan-tsambo mahazatra dia ampiasaina indrindra amin'ny mpanara-maso horonantsary raha ny seranana fampisehoana mini kosa dia ampiasaina amin'ny solosaina ary indrindra amin'ny Apple Macbook.
Ireo seranana roa ireo dia mampiasa fomba fampitana data roa samy hafa, izany no mahatonga ireo teknolojia roa ireo, satria "Ilana"avy amin'ny HDMI ka mampiseho seranana. Amin'ny lafiny iray, mampiasa ny seranana fampirantiana Famantarana ny fahasamihafana amin'ny herinaratra ambany (LVDS) mamoaka 3.3 volt. Etsy ankilany, ny HDMI dia mampiasa ny Taratasy fanamarihana ambany noho ny tetezamita Teknolojia (TMDS) manome 5 volts.
Ireo teknolojia roa dia tsy mifanaraka amin'izany fomba izany, koa mitandrema tsara satria afaka mandoro ny singa misy anao ianao amin'ny fampifangaroana ireo haitao roa ireo. Na izany aza, tsy misy zavatra tsy azo atao, raha ny tena izy, afaka mifamadika mora foana ianao avy eo amin'ny HDMI hampiseho seranana amin'ny fampiasana an Encoder AV-over-IP DisplayPort izay ahafahana mamadika ny riandrano ho lasa renirano video ka hialana amin'ny olana tsy mifanaraka.
Amin'izany fomba izany, ireo endrika roa dia mifanaraka amin'ny alàlan'ny tariby tsotra misy seranana fampirantiana sy socket HDMI. Raha ny marina, ity karazan-tariby ity dia mampiasa volapoky 3.3 volts ary manova azy ho 5 volts.
Hahafantatra bebe kokoa momba ny atao hoe seranana fampisehoana
Karazana HDMI samihafa